Ihhotela Ambassador Inn Wing 3 * (Pattaya)
Incazelo: Ambassador Inn Ihhotela emangalisayo Wing 3 * inikeza izihambi ithuba le ngokucacile kakhulu ukuchitha iholide lakho noma iholide. Abasebenzi be-ihhotela uyabakhathalela kuphela mayelana amakhasimende ayo, ukuhlala ogwini Jomtien, ukunikela Igumbi inkonzo. Kufanele kuqashelwe indawo elula ehhotela. Ambassador Inn Wing 3 * itholakala amakhilomitha ayishumi nanhlanu kusukela emzini Pattaya eThailand. Kungaba ukufinyelelwa ku isigamu sehora kusukela sezindiza.
Amagumbi: Ihhotela It inikeza amaklayenti ayo izakhiwo ezintathu yokuhlala, okuyinto zitholakala amakamelo ayisishiyagalolunye namashumi nesikhombisa kanye nezinhlobo ezahlukene: Standard Twin kanye Standard IW. I amakamelo zonke Izinsiza ezidingekayo kuze kube iholidi ngaphambi ekhumbulekayo: embhedeni ububanzi elithambile, ithelevishini ne iziteshi ezine satellite, ucingo, ngamunye air conditioning, umsakazo, umshini wokomisa izinwele, yokugezela mini-bar lapho abahambi uzothola ukudla okululana.
Ukudla: ensimini ka Ambassador Inn Wing 3 * Ihhotela uzothola zokudlela ezine ethokomele. Base benikezela abasebenzi inikeza amakhasimende ayo ukuzama ezihlukahlukene Chinese, isi-Japanese, French cuisine futhi isiNtaliyane, kanye ezihlukahlukene Ungadla okumnandi uzilungiselele nemikhiqizo phezulu izinga. Amabha eziyisithupha kanye amathilomu, uzothola esizeni, izivakashi ukujabulela unqambothi iziphuzo ezidakayo nezinto zokuhlanza esithambile.
Beach: yangasese futhi khulula sandy beach itholakala ngaphakathi zone ehhotela. Noma yimuphi izivakashi avail omatilasi khona, amathawula, ilanga loungers kanye baphathe nezambulela.
Ulwazi izivakashi: wonke umuntu ohlala e-Ambassador Inn Wing 3 * selikhanyise nethuba lokuvakashela okubhukuda ezine (emibili yayo izingane), amakamelo for izingqungquthela futhi nezingxoxo, nightclub, ibha karaoke, izitolo, a salon ubuhle kanye Jacuzzi. Ehhotela ukhululekile ukudlala amabhiliyade, imicibisholo, ithenisi ezinkulu noma itafula, ibhola likanobhutshuzwayo, Ugalonci, kanye uthole ukufinyelela ngokushesha kwi-Inthanethi ngemali ethile. Ihhotela likuvumela zokwelashwa, massage, nokugada abantwana, ilondolo nokuthunyelwa kwezingubo elondolo. Ambassador Inn Wing ukhuthaza izivakashi ungangabazi ukuxhumana abasebenzi ukuze uthole usizo noma ulwazi olwengeziwe.
Ukubhuka zingenziwa noma ngewebhusayithi main, noma ngocingo. Ihhotela wamukele amakhadi esikweletu ngamazwe, ngakho bakhokhe ekufikeni abahambi ngeke wenze nobunzima kancane.
Ukubuyekeza: izivakashi badumise ehhotela Ambassador City Jomtien Inn Wing 3 * ngokuba umoya wokuzwana ngokungavamile nokuthula esiyitholayo emakamelweni Lihle futhi ivulekile, indawo efanele futhi ngamanani ezifanele. Ihhotela akabashiyi ubani nandaba ngenxa smiling abasebenzi abakhuluma izilimi ezingafani njalo bephuthuma aid kuzo zonke izimo. Ukuhamba nge nomdlandla omkhulukazi mayelana ezihlukahlukene izitsha olungiselelwe kusuka imikhiqizo kuphela fresh futhi unikeza amandla amaningi kwamaholidi abakhuthele Thailand enhle. Ngoba konke lokhu izizathu, singaphetha kahle ukuthi leli hhotela - ukukhetha ephelele kulabo abafuna ukuchitha i iholide asebenzayo lesingeke indawo angavamile.
Mercure Bali Nusa Dua, Bali: ehhotela izindawo, lwekamelo incazelo, izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela "Bilyar Palace" (Kazan): ikheli, incazelo, izibuyekezo, izithombe
Ruby Ihhotela Nha Trang 3 (Vietnam / Nha Trang): incazelo kanye nokubuyekeza
Akhaya Beach Ihhotela 4 *, yePeloponnese nhlonhlo: incazelo ehhotela, izilinganiso
Murmansk amahhotela: kuzibuyekezo, izintengo nezithombe
Montillon Grand Horizon kuyona 4 *, Hurghada, Egypt: izibuyekezo, izithombe
Aristotle Onassis: Into Engakwenza Impumelelo
Indlela yokwenza intombazane ijabule: umyalelo wabantu abanothando
Ukudla sezindela iqoqo: iresiphi, ukwakheka kanye nokubuyekeza
Nissan Tiida: ukubuyekezwa kanye Ukucaciswa
Biography Anatoly Vasilyev: career kanye nempilo yakho
Indlela ngokushesha ukuqeda nezinduna imbongolo? izinyathelo eziphuthumayo
Isizukulwane sokuqala amakhompyutha: esizoqala
Audi A6 C5: Tuning ngezandla zakhe
Juan Roman Riquelme - the yokugcina a mdlali abahlanzekile football umlando
Dolfin Lizamary - iholide fabulous e Bali
Uhlu amahlaya Russian kanye angaphandle imikhiqizo emisha - evelile